Chelsea oo daaqada ka tuurtey Barcelona Final-kana fariisatey VIDEO+SAWIRO – SBC
Chelsea oo daaqada ka tuurtey Barcelona Final-kana fariisatey VIDEO+SAWIRO
Posted by editor on April 25, 2012 Comments
Mid ka mid ah kulamadii ciyaareed ee ugu xiisaha badnaa uguna daawashada badnaa ayaa habeenimadii xaley ka dhacay garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona ee caasimada gobolka Catalonia ee dalka Spain, warbixintan waxaan ku eegaynaa waxyaabihii xaley ka dhacay guriga Barcelona.
Messi oo gool ku laad dayacay.
John Terry oo akhlaaq xumo kaarka cas u qaatey
Gerard Pique oo Isbitaal al dhigay
Fernando Toress oo gool dhaliyey
Kooxda Chelsea ee ka dhisan Galbeedka magaalada London ee caasimada UK ee bishii hore ee March 107 sano jirsatey ayaa guul caaqibo leh oo rafaad iyo hardan badan ay u soo gashay waxay ku gaartey mid ka mid ah tartamada Sports ee dunida ugu xiisaha badan iyadoo sugaysa in Final-ka Champuions League-ga garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich kula kulanto Real Madrid iyo Bayern Munich midkii caawa ka soo gudba kulanka adag ee dhacaya hoyga kooxda Real ee Santiago Bernabéu.
Kulankii xaley Chelsea ay ku daaqada Champions League-ga uga saartey kooxda xiligan dhanka kubada cagta dunida ugu wanaagsan ee Barcelona ayaa ku soo dhamaaday natiijo lama filaan ah oo ka dhigan in garoonkaasi markii afaraad looga badin Chelsea.
Inkastoo Barcelona xaley goolashii garoonka looga dhaliyey aanay u aheyn in laga badiyey kulankii xaley oo barbardhac dhanka goolasha ah 2-2 ay ku soo dhamaatey natiijadu , hadana goolkii Chelsea ay ku dhalisay gurigeeda ayaa ku caawiyey in natiijada labada lug ee kulanka ay noqoto 2-3 (aggregate) taasi oo sharciga Champions League-ga marka la eego natiijadu ka dhigan tahay in Chelsea ay si rasmi ah ugu soo gudubtey Final-ka Munich lagu qabanyo 19-ka bisha May ee soo socota.
Dadka arimaha Sports-ka gaar ahaan kubada cagta ka faalooda waxay dhamaantood natiijada ciyaarta u saadaalinayeen kooxda Barcelona oo la ogyahay sida gurigeeda Camp Nou ugu adag tahay iyo tayada ciyaareed ee ku duugan ciyaartoyda kooxdaasi oo intooda xiligan duniga uga sharaxan laacibiinta ugu horeysa.
Laakiin saadaashaasi waxaa diiday nasiibka iyo waqtiga oo Chelsea saaciday iyo isku kalsoonaan uu muujiyey tababaraha ku meel gaarka ah ee Chelsea ee dhalashada Talyaaniga & Switzerland haysta dalka Talyaaniga u dhashay kaasi oo 15-kii kulan ee Chelsea intii uu hayey badiyey 10, 4 barbardhac galay halka kulan kaliya laga badiyey, kaasi oo adeegsadey markii hore shax weerar laakiin markii captain-ka kooxda Chelsea John Terry uu qaatey kaarka cas oo lagu tilmaamay mid akhlaaq xumo ah oo aan loo baahnayen shaxda u badaley 6-3 oo ka dhigan in difaac adag la galo lana doonto fursad weerar celis ah, inkastoo xiligaasi ciyaarto aheyd 1-0 (1-1) Aggregate.
John Terry wuxuu si ula kac jilibka lugta ugu dhuftey Alexis Sanchez oo isaguna dhulka isku tuuray, isagoo u dan lahaa in la ganaaxo Terry oo u muuqan karay in uu si ba’an u difaaci karo shabaqa kooxdiisa martida ah.
Chelsea oo ciyaarta ku bilowdey carar waxaa looga naxsadey gool daqiiqadii 35-aad ciyaaryahan Sergio Busquets uu ku hubsadey shabaqa Chelsea, iyadoo goolkaasi ka dib Chelsea uu soo wajahay qalqal dhanka ciyaarta ah oo ay u dheereyd buuqa iyo sawaxanka ka soo baxaya in ka badan 90-ka kun taageerayaasha reer Catalonia oo kooxdooda ku taageerayey inay ka soo kabato guuldaradii todobaadkii ka soo gaartey kulankii London ka dhacay ee Chelsea ku soo badisay.
Kooxda martida aheyd ee Chelsea oo kubada awood looga haystey waxaa niyad jabka iyo qaracanku ku soo kordhay markii daqiiqadii 43-aad gool baasbaas ah uu soo ka soo shaqeeyey Lionel Messi uu dhaliyey Andrés Iniesta kaasi oo ka dhigay ciyaarta 2-0 (2-1) aggregate.
Laakiin labadii daqiiqo ee ciyaarta qaybtii hore lagu darey ayaa kubad baasbaas aheyd oo uu ugu dambeyntii xidiga Franka Lampard uu u baasay ciyaaryahanka reer Brazil Ramires wuxuu si xarago ula dhaafay daafacda Barcelona isagoo kubadii jaf ka dul qaaday goolhaye Valdes iyadoo natiijadii ciyaarta noqotey 2-1 (2-2 Aggregate), waxaana la galay 15-kii daqiiqo ee nasiinada.
Qaybtii labaad markii la isku laabtey sidii caadada aheyd Barcelona waxay haystaye kubada iyadoo 10-kii nin ee Chelsea neefta lagu celiyey, balse waxay galeen difaac darbi ah oo ay ku doonayeen inay natiijadu ciyaartu sidaasi ku dhamaato iyadoo 2-2 aggregate ah ay Chelsea ku soo baxayso maadama labada gool ee ay leedahay mid ay ku dhalisay guriga Barcelona kaasi oo ah gool away ah oo qiimo leh.
Daqiiqadii 48-aad ciyaarta oo 2-1 ah ayaa weeraryahanka reer Ivory Coast Dideir Drogba wuxuu gudaha soohdinta Chelsea ku dhex legday ciyaaryahan Cesc Febgers taasi oo garsooraha Turkiga u dhashay uu rigoore u dhigo Barcelona, laakiin lama filaan waxaa aheyd in uu dayacay oo uu birta ku dhufto kubadii xidiga aduunka Lionel Messi iyadoo ay u noqotey xaley markii 8-aad oo uu la kulmo Chelsea oo aanu gool ka dhalin, waxaana Chelsea ay noqonaysaa kooxda kaliya ee abid ay kulmeen Barcelona ee aanu gool ka dhalin ilaa iyo hada Lionel Messi.
Nasiib iyo ninkiisa ayaa is arkee rigoorada Messi uu cunay, birta oo uu mar kale garaacay, laad xor ah oo meel walba uga imaanayey Chelsea, difaac, dhex iyo weerar kooxdii Chelsea oo dhan oo goolka hortiisa dhoobatey waxay diideen in kubad dhaafto, tii dhaaftana uu isku duubo goolilaaiye Peter Cech, halka kubada kale ee shubaqa ku socoteyna ay banaanka isaga baxaysay.
Tababaraha Barcelona Pep Guardiola wuxuu shaxda ama qaab ciyaareedka u rogay 2-3-5 oo macnu yahay in shan nin ay weerarto goolka Chelsea, waxaase tababaraha Chelsea oo ku xisaabtamayey in 10 nin ay yihiin uu isna ku adkeystey shaxda 9-0-0 oo macnu yahay in 9 nin kubada ka dambeyso oo ay difaac wada noqdaan.
10 daqiiqo ciyaarta oo ay ka dhimantahay ayaa tababaraha Chelsea wuxuu badal ku bixiyey Drogba oo daal iyo jugeyn culus qabey, waxaana badal ku soo galey Fernando Toress, balse Toress-kii lagu yiqiin in uu goosha cadowga ag taagnaado ma ahayne wuxuu ka mid noqdey difaacyada Chelsea taasi waxaa uga wacneyd kubada isku dhiidhiibka ah ee Barcelona ku qabsatey garoonka weynanka badan ee Camp Nou.
Waqtigii loogu tala galay ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 3 daqiiqo kubad iga bixi aheyd oo ay soo tuureen ciyaaryahanada Chelsea ayaa waxaa meel cidlo ah ka dafey Toress isagoo kula cararay dhanka goolka Barcelona waxaana uu cago ugu been sheegay oo uu orod uga tagey Busquets & Mascherano isagoo kubadii ula tagey goolhaye Valdes wuxaana isagoo wata kubadii uu geeska ka dhaafay Valdes, isla markaana ku hubsadey shabaqa Barcelona waxaana halkaasi ku dhamaaday rajadii Barcelona ee ay ku doonaysay inay ku difaacato Champions Leageu-ga.
Natiijada ciyaarya ayaa ku soo idlaatey 2-2 (2-3) aggregate iyadoo sidaasi Chelsea ay ku soo baxdey, isla markaana ku timid markii labaad taariikhda final-ka Champions League-ga.
Ku darso intii aad horey u ogeyd
Barcelona gurigeeda Nou Camp xili ciyaareedkan waxay ku dhalisay 102 gool,
Barcelona laga soo bilaabo October sanadkii 2009 gurigeeda ciyaaraha Yurub marna dhinaca dhulkeeda lama dhigin waana 15 kulan oo is xiga, 13 ayay badisay labana barbardhac.
Shantii kulan ee ugu dambeysay Champions League-ga Barcelona gurigeeda waxya ku dhalisay 18 gool.
Chelsea afartii kulan ee ugu dambeysay ee ay ku ciyaartey Nou Camp lagama badin.
Lionel Messi ayey haysataa abaar gool la’aan sadex kulan oo isku xiga kuwaasi oo
Fernando Torres wuxuu noqdey ciyaaryahankii 19-aad ee kulamada Champions Leauge-ga gool ka dhaliyo Barcelona & Real Madrid, wuxuu kaloo noqdey ciyaaryahankii ugu horeeyey ee Spanish ah sidaasi sameeya.
Afar ka mid ah 12-ka kaarka cas (red Card) ee Chelsea la siiyey xili ciyaaraha Champions Leauge-ga afar ka mid ah waxay ku qaadatey kulamada ay la leedahay , afar kooxood ayaa Chelsea ka red card badan Champions Leaugeu-ga kuwaasi oo kala ah PSV (13), Galatasaray (15), Internazionale (17) & Juventus (19).
Hadii Chelsea ay qaado Champions Leauge-ga waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay ee ka socota London oo qaada koobka Yurub, shan caasimadood oo kaliya ayaa kooxo ka socdaa koobkan ugu weyn Yurub qaadey kuwaasi oo kale ah Madrid (9), Amsterdam (4), Lisbon (2), Bucharest (1) and Belgrade (1).
Hadii Chelsea qaado Champions Leaugue-ayna ku dhameysto xili ciyaareedkan horyaalka Premier League-ga kaalin ka baxsan afarta hore oo ay gasho 5-aad, lixaad ama ka durugsan si toos ah ayay sanadkan dambe uga soo qayb galaysaa Champions League-ga maadama ay difaacanayso.
Si kastaba ha ahaatee Barcelona oo haatan u muuqata inay seegtey koobka La Liga Spain, isla markaana xaley qoorta laga qabtey Champions League-ga waxay u muuqanaysaa in tajaabo culus lagu bilaabay boqortooyadii kubadeed ee ay sanooyinkan haysatey, xili waliba ciyaaryahanada laf dhabarka u ah ay soo foodsaarayso da’a iyo duqnimo, isla markaana tababare Pep Guardiola uu ka caal taagleynayo in uu saxiixo heshiis cusub isagoo heshiiska uu kula joogo Barce uu ugu egyahay xagaagan.
Halkan ka daawo wacdarihii xaley ka dhacay Nou Camp oo video
ASC Barcelona xalay waa la sixray oo goolkii chelsea ayaa loo weyneeyeey shekadaas ma maqasheen qofkii banooni ciyaari jirey wa garan karaa, ciyaarihii gobolada somaliya waayo waayo Kismaayo ayaa lagu xaman jirey sheekdaan oo kale marka xalay Chelsea sixir ayeey wadatay lakiin sixirkaasna finalka kumaqaadi doonto koobka sc.
YAA UDIDAYA HADAYBA XALAY KU BADISAY SIXIR INAY FINALKA KUQADO KOOBKAN
KKKK DIINI SXBOW ALI AYAA KUU JAWAABAY EE VIVA CHELSEA I HATE BARCELONA FOREVER BURJIGII IYO KARAAMADII BARCELONA WAA DHAMAATEY NO LALIGA NO CHAMPIONS IS NOTHING CUP HAHAHAHAH
BYYYY MY TEAM IS REAL MADRID
ASCaleyku ALI iyo Ismail difosanimada nocaas ma aha marka banooni soo barta. Mida kale sixir waxaa isticaamala Naagaha iyo ninka doqonkaa sidaas ogaada ninka ragga ah waa ninka qira in banoonigu yahay cagaar iyo guduud dadkii hore sidaas ayey dhihi jireen sc.